Maxaa looga dan lahaa wareegtadii FARMAAJO? - Allbanaadir
Home Xogta Dahsoon Maxaa looga dan lahaa wareegtadii FARMAAJO?
Maxaa looga dan lahaa wareegtadii FARMAAJO?
Kadib wareegto kasoo baxday xafiiska madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhammaaday ayaa waxaa lagu shaaciyey amar ah in aysan geli karin hay’adaha dowladda heshiisyo siyaasaddeed, mid amni iyo kuwa dhaqaale, inta lagu guda jiro xilliga kala guur ah, isla-markaana laga qabanayo doorashooyinka dalka ee 2021-ka.
Prof Huseen Warsame oo ah bare Jaamacadeed oo ku sugan magaalada Calgary ee dalka Canad ayaa fasiraad ka bixiyey wareegtada uu soo saaray madaxweynaha oo ku soo aaday xilli xasaasi ah, wuxuuna shaaciyey inay tahay mid muhiim ah oo ku soo aaday xilligeeda.
Aqoonyahankan ayaa xusay in adduunyada inteeda ay ka jirto arrintan oo kale, isla-markaana la qaado tallaabooyinkan, marka la gaaro waqtiga doorashada.
“Anigu waxaan isleeyahay cid loola jeedaa oo gaar ah in aanay jirin, laakiin waxaa muhiim aheyd koleyba mar haddii kala guur la joogo een dad badan oo xilal haya oo soo noqoneyn-baa jira, kana baqanaya inay doorashada waayaan, marka aduunyada oo dhanba waa iska sidaas, ” ayuu yiri Prof Huseen Warsame oo ah bare Jaamacadeed.
Sidoo kale wuxuu intaasi sii raaciyey in tallaabada uu qaaday madaxweynaha uu sharciga u ogol-yahay, maadaama uu yahay cidda ugu sarreysa ee maamulka dowladda.
“Qodobka 18-aad ee dastuurka wuxuu madaxweynuhu awood u siinayaa in isagu yahay cidda ugu sarreysa ee dowladda ha noqoto fulin ama ha noqoto sharci dajin ama garsoor,” ayuu raaciyey.
Prof Huseen Warsame oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay inay jiri karaan farsamooyin kale oo madaxweynaha ku kalifay amarkan, balse si guud marka loo eego ay warqaddani ku soo aaday xilli loo baahnaa, isla-markaana ay dowladdu ku kalifeyso inay dadajiso doorashada.
“Anigu waxaan is leeyahay warqadan waqti yare loo baahnaa ayey soo baxday oo tartarsiin doonto dowladdu, si aanay mashruucyada uga xirmin ayna deg deg isaga dhammeyso arrimaha doorashooyinka ee daba jiitamay-baan anigu isleeyahay,” ayuu markale yiri.
Si kastaba direegtada kasoo baxday xafiiska madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday ee xayiyaaradda lagu saaray hay’adaha dowladda ayaa timid, kadib markii uu soo shaac baxay safarka wafdiga ka socda dalka Kenya ee maanta soo gaaray magaalada Muqdisho.